Iibso "Kofi marka hore. Qorshayaasha dambe" Madte Black Magic Coffee Mug - Daabacaad Lacag La'aan & Canshuur La'aan | WoopShop®
"Kafeega Koowaad. Qorshayaasha Mar dambe" Daabacaadda Matte Black Magic Coffee Mug
"Kafeega Koowaad. Qorshayaasha Mar dambe" Daabacaadda Matte Black Magic Coffee Mug gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Yaan jeclayn layaab wanaagsan? Koobkan kafeega ah ee midab-beddelaya, waxaad xaqiiqdii ku jirtaa mid weyn. Muunadani waxay leedahay dhammaystir madow oo madow markay madhan tahay. Laakiin marka ay taabato cabitaan kulul, koobku wuxuu muujinayaa daabacaad qurux badan oo had iyo jeer kaa dhigaysa inaad dhoolla caddeyso markaad cabtid xulashadaada.
Nooca: Kafee marka hore. Qorshayaasha dambe Magic Mug
Dhererka: 3.85 ″ (9.8 cm)
Ballaca: 3.35 ″ (8.5 cm)
Dhamaadka madow ee madow marka qabow
Waxay muujineysaa daabacaadda marka ay soo gaadhaan dareerayaasha kulul
MAYA makiinada weelka dhaqata ama microwave amni
Xusuusnow: in mararka qaarkood daaha laga yaabo inuusan noqon 100% madmadow oo muuqaalka naqshadda ayaa laga yaabaa inuu yara yaraado. Sidoo kale, waa inaadan dhigin dhalooyinka microwave ama weelka dhaqitaanka maadaama ay dhaawici karto daaha.